विष्णु माझि स्याङ्जामा एका एक रत्यौलिमा गाउने र नाचेको भिडियो भाइरल हेर्नुहोस भिडियो — newsparda.com
विष्णु माझि स्याङ्जामा एका एक रत्यौलिमा गाउने र नाचेको भिडियो भाइरल हेर्नुहोस भिडियो ।
विगतमा बालबच्चाहरु कुपोषित हुन्थे । उनीहरुले भरपेट खानै पाउँदैनथे । तर, अहिले परिस्थिति ठीक विपरित छ । बच्चा हरुले आवश्यक्ताभन्दा बढी खानेकुरा खाइरहेका छन् । आमा बुवाहरुले कोचीकोची खाना ख्वाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
यसले गर्दा बच्चाहरु मोटोपनको सिकार समेत भइरहेका छन् ।
अर्कोतिर अहिलेका बालकालिकाहरु घरको खानामा भन्दा बढी बजारको खानेकुरामा लोभिएका छन् । रेष्टुरेन्टमा पाक्ने परिकार र फास्टफुडले पेट भर्ने गरेका छन् ।
यस किसिमको खानपान शैलीले उनीहरुको स्वास्थ्यलाई कति हानी गरिरहेका छ ? उनीहरुले आवश्यक पोषकतत्व पाइरहेका छन् वा छैनन् ?
। यसै यसै सन्दर्भमा पोषणविद् उमा कोइरालासँग कुराकानी गरिएको छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
माधब नेपालसंग पार्टीको सहअध्यक्ष्य माग्दा दिनु भएन, उल्टै चरित्र हत्या भोः बामदेव गौतम
नेकपा एमाले छाडने र माधब नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लाग्ने घोषणा गरेका बामदेव गौतमले आफुले माधब नेपालसंग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सहअध्यक्ष माग्दा माधब नेपालले जवाफै नदिएको बरु एकीकृत समाजवादी पार्टीले नै आफ्नो चरित्र हत्या गरेको आरोप लगाएका छन ।
माधव नेपालको मूल ढोकै बन्द भो
यो सिद्धान्त परित्याग गरेपछि हामी नेपालमा पनि सफल हुँदैनौ, अरू कुनै पनि ठाउँमा सफल हुँदैनौँ । जबजको विचारका आधारमा अघि बढेपछि संसारभरि समाजवाद आउन सक्छ ।
अमेरिकाजस्तो देशमा समाजवाद लागु हुन सक्छ । किनकि, अबको समाजवाद भनेको पुँजीवादसहितको समाजवाद हो । त्यसो भएर संसारभर त्यो समाजवाद आउन सक्छ र त्यही समाजवादको बाटोमा हिँड्दै जाँदा एक दिन साम्यवादमा पुग्नेछौँ भनेर मैले पटक–पटक भनेको छु । मैले सबभन्दा पछि प्रकाशित गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद तुलनात्मक अध्ययन’ भन्ने पुस्तकमा पनि राम्रैसँग लेखेको छु ।